मोदीको भ्रमणले सकेसम्म नेपालीको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
महेन्द्रबहादुर पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
अहिलेको भ्रमण पहिलाका दुई भ्रमणभन्दा निकै सकारात्मक र फलदायी छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । उनी नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने सन्देश अरु छिमेकीहरुलाई दिन चाहन्छन् । त्यसकारण उनको दृष्टिबाट पनि यो भ्रमण सकारात्मक हो भन्न सकिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । तर, उनी स्वदेश फर्किए पनि उनको चर्चा भने सेलाएको छैन । निकै कूटनीतिक भाषण गर्ने तर कडा स्वभावका मोदीको नेपाल भ्रमणलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग मोदीको नेपाल भ्रमण लगायत विषयमा मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–
तपाईंले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछिको यो तेस्रो भ्रमण हो । उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नेपालको पहिलो भ्रमणमा आउँदा म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । त्यतिबेला हामीले उहाँको भव्य स्वागत पनि गरेका थियौं । उहाँले त्यतिबेला नेपालीको मन जितेर जानुभयो । उहाँले त्यसैबेला पशुपतिनाथको पनि दर्शन गर्नुभएको थियो । यी सबै कुराले उहाँको नेपाल भ्रमण निकै राम्रो भएको थियो । उहाँ दोस्रो पटक सार्क सम्मेलनको अवसर पारेर नेपाल आउनुभयो । त्यतिबेला उहाँले जनकपुर जाने र जानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यति मात्र होइन उहाँले त्यसैबेला मुक्तिनाथको पनि दर्शन गर्ने र लुम्बिनी हुँदै फर्किने इच्छा गर्नुभएको थियो । हामीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीलाई पूजाआजा गर्नका लागि व्यवस्था गर्ने पनि भन्यौं । तर, जनकपुरमा अहिले जस्तै उहाँले १२ बिघामा भाषण गर्ने, केही साइकल बाँड्ने तयारी पनि गरेको सुनेपछि हामीले त्यो अलि सम्भव नहुने भनेपछि सबै भ्रमण क्यान्सिल गरेर स्वदेश फर्किनुभयो ।
उहाँ अहिले फेरि तेस्रो पटक आउनुभएको छ । उहाँले १२ बिघामा भाषण पनि गर्नुभएको छ र मुक्तिनाथ पनि जानु भएको छ । यसलाई चाहिं कसरी लिने ?
अहिले उहाँको एक हिसाबले भन्ने हो भने धार्मिक र सांस्कृतिक भ्रमण पनि हो भनेर चर्चा गरिएको छ । उहाँले यो पटक जनकपुर आएर जानकी मन्दिरमा दर्शन मात्र गर्नुभएन । उहाँलाई १२ बिघामा भव्य नागरिक अभिनन्दन पनि गरिएको छ । उहाँले काठमाडौंमा पनि पशुपतिको दर्शन मात्र गर्नुभएन । उहाँले राजनीतिक भेटघाट पनि गर्नुभयो । उहाँ मुक्तिनाथ पनि जानुभयो । तर, उहाँ यो पटक पनि लुम्बिनी जानुभएन । एक जना हिन्दुवादी छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री यहाँ आएर दर्शन मात्र गर्नुभयो र जानुभयो भन्ने अर्थबाट मात्र बुझ्यो भने त्यो कमजोरी हुन्छ । अघि पनि मैले भनें, उहाँ नेपाल आएर धार्मिक दर्शन मात्र गरेर फर्किनुभएन । उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैसँग राजनीतिक भेटघाट पनि गर्नुभयो । त्योसँगै अरुण तेस्रोको उद्घाटन गर्ने लगायतका हमत्वपूर्ण काम पनि भेटघाटका क्रममा भए । यी सबै सकारात्मक छन् ।
कतिपयले त नाकाबन्दीले धमिलो बनाएको छवि सुधार गर्न मोदी नेपाल आएका हुन् भनेर पनि चर्चा गरेका छन् नि ?
हो, विगतमा गरेको नाकाबन्दीले उनको छवि धमिलो भएको थियो । भारतको त्यो व्यवहारका कारण नेपाली जनता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि असन्तुष्ट थिए । यस पटकको भ्रमणमा मोदीले सकेसम्म नेपालीको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् । उनले त्यति मात्र होइन नेपाल–भारतको सम्बन्धको कोर्स नै बदलिएको सन्देश दिने प्रयास पनि गरेका छन् । यो उनको सफलता पनि हो । उनको यो भ्रमणले दुई छिमेकीको सम्बन्धमा सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । मोदीको यो भ्रमणले हाम्रा सम्बन्धहरु आगामी दिनमा सकारात्मक ढंगले अघि बढ्लान कि भन्ने भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।
तर, मोदीको तेस्रो भ्रमणलाई नेपाली जनताले खासै रुचाएन भन्ने पनि आरोप छ नि ?
हामीले यसलाई दुई ओटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो संसारको परिस्थिति जस्ताको त्यस्तै कहिल्यै पनि रहँदैन । त्यो परिवर्तनशील हुन्छ र परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिले नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ । हो, नेपालीले नाकाबन्दीका बेला निकै ठूलो पीडा खेप्नुपरेको थियो । त्यो सत्य हो । तर, नाकाबन्दीपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफँैले नाकाबन्दी गलत थियो भनेर नभने पनि त्यहाँका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाजमा प्रतिष्ठा कमाएकाहरु सबैले भारतको नीति गलत थियो भनेर भनेकै हुन् । नेपालले पनि दृढ मनोबलका साथ आफ्नो राष्ट्रियताका लागि जे सहन पनि तयार छौं तर झुक्दैनौं भनेर नाकाबन्दीको सामना गरकै हुन् ।
अहिले मोदीले नेपाल भ्रमणबाट नेपाली जनतामा भारतप्रति जागृत भएको नकारात्मक भावनालाई चिर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसकारण पनि उनको भ्रमण तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । मोदीले पछिल्लो समय छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि, उनको त्यो प्रयास पूर्णरुपमा सफल हुन नसकिरहेका बेला मोदीले नेपाल भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधारको हात फैलाएका छन् । नेपालले त्यसको स्वागत गर्नुपर्छ ।
अहिले मोदीले एक वर्षपछि हुने भारतीय चुनावसँग जोडेर पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको भन्ने पनि चर्चा छ नि ?
भारतमा एक वर्षपछि फेरि राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ । यो सन्दर्भमा मोदीको छिमेक नीति त्यति बलियो बन्न नसकेको भन्दै आरोप लाग्दै आएका बेला उनले छिमेकसँग सम्बन्ध असल छ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि नेपालको भ्रमण गरेको हुन सक्छन् भन्ने पनि छ । त्यसैले अहिलेको भ्रमण पहिलाका दुई भ्रमणभन्दा निकै सकारात्मक र फलदायी छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । उनी नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने सन्देश अरु छिमेकीहरुलाई दिन चाहन्छन् । त्यसकारण उनको दृष्टिबाट पनि यो भ्रमण सकारात्मक हो भन्न सकिन्छ । यद्यपि मोदी फर्किएका छन् । उनी फर्किए पनि उनले नेपालको भूमिमा आएर गरेका बाचा पूरा हुने वातावरण निर्माण होस् हामी यही चाहन्छौँ ।
अहिले मोदी सिधै भारतबाट काठमाडौं नआई जनकपुर हुँदै आए । त्यसले पनि मोदीको मोह प्रदेश नम्बर–२ मा अहिले पनि त्यत्तिकै छ भन्ने पनि आरोप छ नि ?
त्यो बाघ कराउने र किलो रित्तो भन्ने कुरा जस्तै हो । अझ भन्ने हो भने ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ’ भन्ने कथा जस्तै हो । हिजो नाकाबन्दी हुँदा तराईकै साथीहरुलाई हौसला दिएर उनले नेपाललाई अझै गलाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास पनि गरे । तर, त्यो सम्भव भएन । अहिले नेपालमा संविधान जारी भएको छ । त्यही संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सकिएको छ । स्थीर सरकार बनेको छ । यो बेलामा मोदी आउँदा जनकपुरको बदलामा पोखरामा प्लेन ल्याण्ड गरेर मुक्तिनाथ गएर फेरि फर्केपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरी जनकपुर हुँदै फर्किएका भए अझ राम्रो हुने थियो । यद्यपि, अहिलेको भ्रमण पनि त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने खालको छैन । उनी नेपाल आउँदा सन्तुलित नै भाषण गरेर गए । बरु प्रदेश नम्बर–२ का सञ्चालकहरुले चाहिं मोदी आएका बेला बिन्तीपत्र हाले जस्तो गरेर मर्यादाको खिल्ली उडाउने काम गरे । यो बेठिक छ । मोदीको बारेमा हामीले त्यति धेरै चर्चा गर्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा उनले कस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्छन्, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । अहिले मोदीको भ्रमण दुई देशबीचको सन्तुलन पनि हो ।